06 / 07 / 2019 | RayHaber | raillynews
Maalinta: 6-ka July, 2019
Corum waa inay noqotaa baahida gaadiidka degaanka
Farxadda maalgashiga Volkswagen, ee ku qulquley Çorum, waxaa ka dhashay warar aad u daran oo ku saabsan in maalgashigu u weecday Bulgaria. Farxadda maalgashiga Volkswagen, ee ku qulquley Çorum, waxaa ka dhashay warar aad u daran oo ku saabsan in maalgashigu u weecday Bulgaria. Ololeeyaha madaxweynaha [More ...]
Dejinta tartanka qoob-ka-cayaarka ee loogu talagalay Tramways Nostalgic
Sannadkan, 33, 30, oo ah bandhiga qoob-ka-cayaarka dadweynaha ee dalka udhow 33. Munaasabadda furitaanka tartanka caalamiga ah ee Karagöz Folketka Qalabka 7 July 2019 Axad, 18: 00-19: saacadaha 30 ee u dhaxeeya Nostalgic [More ...]
Kardemir qaybta qorshaha mustaqbalka ee leh KfW-IPEX Bank
Warshadaha Garabuk iyo Farsamooyinka (KARDEMIR), AS. KfW-IPEX Bank, shirkad caalami ah oo ku saleysan Jarmalka, ayaa ka wada hadashay qorshayaasheeda mustaqbalka. Maaliyadda Caalamiga ah sida IsDB, EBRD, IFC iyada oo qaab dhismeedka hay'adeynta iyo aragtida horumarka joogtada ah [More ...]
Sivas Demirspor Kulanka Kooxda Kulanka Held
Maamulka Isticmaalka Naadiga Sivas Demirspor Ka dib markii Golaha Dhexe ee Tudiga ee Tuddagbeq Nuri Demiraj ay wada yimaadeen. Shirkii ugu horreeyay ee Guddiga Agaasimayaasha ee lagu qabtay guddomiyaha Madaxtooyada iyo Tüdemsaş General Mehmet Başoğlu [More ...]
Martyr Muhammed Yalcin iyo Kizilay Street waa la iftiimiyay
Iyada oo la raacayo baahida dowladda hoose ee Karaman, shaqooyinka nalalka laydhka ee waddada Martyr Muhammed Yalçın iyo Kızılay Street waxaa sii wada mas'uuliyiinta Medaş. Maamulka dawlada hoose, oo leh rabitaanka iyo rabitaanka muwaadiniinteenna ku nool deegaanka cusub ee TOKI Martyr Muhammad [More ...]
Marka hore Trabzon khadka tooska ah ee dadka lugeeya
Dowlada Hoose ee Trabzon, Wasaaradda Arimaha Gudaha 2019 sanadka 'Sanadka Muhiimka ah ee Wadada' ka dib ololaha ayaa laga bilaabay guud ahaan dalka, iyadoo la adeegsanayo shaqaalaha degmada iyo tas-hiilaadku sii wadaan taageeradooda. Dawlada Hoose ee Trabzon [More ...]
MUTTAŞ Hirgalinta 3 Milyan Tirada Gaadiidka Gaadiidka
MUTTAŞ, aasaaska Degmadda Muğla ee Magaalo Weyn, waxay qaadday 2 Milyan 891 kun oo rakaab ah magaalada Muğla, oo leh laba garoon diyaaradeed tan iyo markii la aasaasay. [More ...]
Goobaha Badbaadinta Gawaarida ee labaad ayaa ku yaala Ormanya
Kocaeli, Dabiiciga Dabiiciga ah, oo soo dhoweynaya marti-sharaf badan oo ka kala socota gobollada deriska ah iyo dibedda, ayaa soo jiidata dadka doonaya inay waqti ku qaataan dabiicadda, ka fog diiqadda iyo dabeecadda. Marka lagu daro booqdayaasha maalinlaha ah [More ...]
Waddada iyo iskuxirida Kocaeli
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo ahmiyada siisa cagaar iyo dabiiciga, uma dayacayso dayactirka meelaha cagaaran. Wareegtadan dhexdeeda, D-100, D-130 jidadka waaweyn ee ku yaal xudduudda Beerta Nasashada iyo Deegaanka Aaga Kocaeli [More ...]
Racfaanada Kabaha Baabuurta Tigidhka Tikidhada waxay ku koraan Avalanche ee Alanya
Jawaab celinta qiimaha wadooyinka go'ay ee New Alanya ayaa sii socda. Aamusnaanta ee degmada Alanya waxay soo jiidatay dareenka doodda jidka '900 METER 5' oo codsatay in la raaco baabuurka fiilada koronto. [More ...]
2018 Thousand 436 Dadku waxay ku safrayeen 755 East Express
Sida uu qabo Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, CD Türk Telekom 2. National East Express Tam O xaflad abaalmarinta sawir qaadashada sawirada 05 July July at 2019 Hotel Hotel Ankara [More ...]
Renault Trucks Difaaca Gawaarida Qaboojiyaha ah
taasoo keentay logistics qaboojiyeyaasha shirkad Turkey ee Erman Logistics xoojisaa ay raxan ah Renault Baabuurta la isjiidka. Shirkadda Mersin ee saldhigeedu yahay Erman Logistics, waa mid ka mid ah shirkadaha saadka ee sida wanaagsan loo habeeyay ee qaybta gaadiidka qaboojiyaha, [More ...]
Shilalka Metrobus ee Mecidiyekoy, Istanbul
Shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxeysa Mecidiyeköy iyo Zincirlikuyu ayaa joogsaday Istanbul. Shilka, dadka 1 ayaa ku dhaawacmay, oo ay ku jiraan rakaabka 2 ee lugta iyo metrobus ah. Duullimaadyadii Metrobus ayaa istaagay in muddo ah. Shilka 23.15 [More ...]
Maanta taariikhda: 6 July 1917 Al Vecih iyo mucaaradka Aqaba